Cookie Run Kingdom Apk Download Ho an'ny Android [Vaovao 2022] | APKOLL
Cookies Run Kingdom Apk no fampiharana Android farany, izay sehatra filalaovana lalao tsara indrindra ho an'ny mpilalao. Afaka manangana fanjakan'ny cookies ianao ary miady amin'ny ratsy sy ny fahavalo hiaro ny fanjakanao. Raiso amin'ny app Android ity rindrambaiko ity ary milalao ny lalao mamy indrindra hatrizay.
Ny filalaovana cookies sy sakafo dia iray amin'ireo fialamboly mahazatra indrindra amin'ny ankizy amin'ny fahazazany. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa mahavariana ity ho anao rehetra hanana traikefa mitovy amin'ny fitaovanao Android fa fantatrao fa afaka mahita ny vokany ianao tsy ny eritreritra fotsiny.
Inona ny Cookie Run Kingdom Apk?
Cookies Run Kingdom Apk dia lalao filalaovana Android, izay manolotra sehatra filalaovana RPG mahafinaritra indrindra ho an'ireo mpilalao hilalao sy hankafiziny. Manome anao hanatanteraka ny sary an-tsaina ny fahazazanao ho lasa zava-misy miaina sy hankafy ny vokany.
Ny tantara dia manomboka amin'ny mpamosavy, izay nanamboatra cookies isan-karazany eran'izao tontolo izao tamin'ny fampiasana ody sy majika. Misy karazany samy hafa misy, fa eo amin'izy rehetra, misy dimy. Izy dimy no hery nahagaga indrindra niady sy nitondra. Natao tamin'ny fanahy madio izy ireo mba handresy ny ratsy.
Noho izany, misy karazana hafa, izay te-hanimba ny rehetra. Noho izany, ianao dia toetra dia iray amin'ireo dimy ary ianao dia ao amin'ny tanàna kely iray, izay tsy maintsy hanorina sy hanao fanjakana. Ny efatra hafa koa miaraka aminao ao amin'ny Lalao 3D, fa hery sy ody kely ihany no anananao.
Noho izany, tsy maintsy manao ny hazakazaka ianao ary manimba ny mpanohitra amin'ny ady. Ny fananganana sy ny famolavolana dia iray amin'ireo lohahevitra lehibe, izay tokony hofenoinao. Misy trano samy hafa izay tsy maintsy aorinao sy hataonao fanjakana matanjaka kokoa. Ny sasany amin'ireo trano lehibe, izay tsy maintsy havaozinao na hatsanganao dia eto ambany.
Afaka mahita endri-javatra bebe kokoa azo alaina amin'ny lalao ianao. Ny serivisy fanamboarana na fanamboarana dia misy ihany koa ho an'ny mpilalao, izay ahafahanao mamerina tranobe sy zaridaina mikorontana. Afaka manana traikefa tsara kokoa sy mahatalanjona kokoa ianao amin'ity fampiharana ity.
Tsotra sy mahatalanjona ny filalaovana, izay misy fomba maodely samihafa ahafahan'ny mpilalao milalao sy mankafy. Azonao atao ny milalao ny tantara ary mahavita ny iraka rehetra eo noho eo, izay ahafahanao milalao sy mankafy.
Ady kely misy tafika kely no azon'ny mpilalao milalao sy ankafiziny. Azonao atao ny mahita ny famoriam-bola tsara indrindra amin'ny ambaratonga 200 samihafa. Misy iraka na fikatsahana isan-karazany isan'andro, izay tokony hidiranao sy hofarananao.
Ny fikatsahana dia hampitombo ny fahaiza-manaon'ny toetranao ary hanome tosika ara-toekarena ho an'ny fanjakanao ihany koa. Noho izany, azonao atao ny manatsara ny fahaiza-manaon'ny toetra rehetra ary mankafy ny lalao. Misy fananana ara-toekarena samihafa azo alaina, izay manome anao fampiroboroboana. Ny fananana dia azo jerena eto ambany.
Ireo no fananana maro, izay ahafahanao manatsara mora foana ny hery, ny fahaiza-manao ary ny zavatra hafa. Noho izany, misy endri-javatra mahagaga an-taoniny azo hankafizin'ny mpilalao rehetra. Raha liana amin'ny lalao adventure ianao, dia afaka mahita lalao mahafinaritra ihany koa ianao Ragnarok Origin Apk.
Azonao atao ny mizaha endri-javatra mahavariana kokoa amin'ity lalao ity ary mankafy azy ity. Noho izany, mahazoa ny Cookie Run Kingdom For Android ary mankafiza milalao. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao momba ny lalao aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra hita etsy ambany.
anarana Fanjakan'ny Cookie
Anaran'ny fonosana com.devsisters.ck
Developer Ny sandan'ny anjara Devsisters Corporation
Azo alaina eto amin'ity pejy ity ny Cookie Run Kingdom Download ary azonao atao ihany koa ny misintona azy amin'ny Google Play Store. Saingy tsy mila mandany ny fotoanao amin'ny fitsidihana sehatra maro ianao. Noho izany, tsindrio ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Hanomboka afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Lalao tsara indrindra sy lalao RPG
Amboary ny fanjakanao
Hanatsara ny fahaiza-manao sy ny hery
Fanamboarana sy fananganana
Fanaraha-maso malefaka sy tsotra
Cookie Run Kingdom Apk no sehatra tsara indrindra ho an'ireo mpilalao mankafy mankafy lalao filokana. Misy ny sasany amin'ireo fiasa tsara indrindra azon'ny mpampiasa mankafy lalao. Noho izany, raiso ity fampiharana ity ary manomboka mankafy azy.
Sokajy Games Tags Cookie Run apk Fanjakana, Cookie Run Kingdom Download, Cookie Run Kingdom Ho an'ny Android Post Fikarohana